Iraisam-pirenena Shinoa ny fisaraham-Panambadiana ny Mpisolovava ao Shanghai, Shina - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Iraisam-pirenena Shinoa ny fisaraham-Panambadiana ny Mpisolovava ao Shanghai, Shina
Ny fahazoana ny fisaraham-panambadiana dia tsy mora fa mandalo iray ianao, rehefa lavitry ny trano no tena sarotra
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ny fitadiavana ny marina, marina ara-dalàna ny toro-hevitra dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra ny fikirakirana ny fisaraham-panambadiana ao Shina.
Soa ihany, ianao efa nahita ity pejy ity ary ankehitriny-tsara eo amin'ny fomba fahatakarana inona ny safidy ireo sy ny zavatra tokony hatao manaraka. Ny zavamaniry no hita mba hamaly ny fanontaniana ao anatin'ny efatra amby roa-polo ora amin'ny tena tsy misy vidiny ho anao, ka aza misalasala mba hifandray. Izany dia zava-dehibe mba hitady toro-hevitra avy amin'ny tany am-boalohany ny mpisolovava alohan'ny hidirana ao amin'ny ponenana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny vadinao. Ny manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena ny fianakaviany ny lalàna mpampanoa lalàna dia ho afaka manoro hevitra anao ny fifanohanana ara-bola, sy ny mety ho vokatry ny fisaraham-panambadiana ao Shina raha oharina amin'ny firenena hafa. Izany no zava-dehibe ny mahazo ity vaovao ity ao amin'ny dingana iray tany am-boalohany mba manao fanapahan-kevitra. Ny olom-pirenena vahiny, izay manambady avy amin'ny shina Tanibe ny olom-pirenena na ny any Shina na any ivelany dia afaka mahazo ny fisaraham-panambadiana any Shina na dia sady tsy vadinao amin'izao fotoana izao mipetraka any Shina. Roa ireo mpiasa vahiny, manambady na ny any Shina na any amin'ny firenena hafa, afaka mahazo nisara-panambadiana ao Shina raha toa izy ireo hihaona vitsivitsy tena ilaina ny toe-piainana. (Bebe kokoa mikasika izany na inona Na inona izay tsy nanambady, mpila ravinahitra mpivady dia afaka mahazo nisara-panambadiana ao Shina. Mba antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana ao Shina ianao no tsy maintsy hihaona vitsivitsy fepetra fototra: - Na inona na inona ny zom-pirenena, ny fisaraham-panambadiana dia namoaka tao Shina dia ara-dalàna sy manan-kery manerana izao tontolo izao. Raha vao ny fisaraham-panambadiana dia ampiasaina ao Shina, dia tsy tokony hanao izany intsony ao an-trano ny firenena. (Fantaro bebe kokoa ny tranga Tsirairay dia tsy mitovy, fa eo an-tanan ny za-draharaha Shinoa ny fisaraham-panambadiana sy ny fianakaviany ny lalàna mpampanoa lalàna ny fisaraham-panambadiana eo amin'ny roa avy any ivelany ny olom-pirenena dia afaka ny ho vita alohan'ny amin'ny heverinao fa samy mpivady dia afaka ny ho tonga aminà fifanarahana hatrany na inona na inona niavaka ny olana mifandray amin'ny ny fisarahana.
Ho ekena iraisam-pirenena mpila ravinahitra fisaraham-panambadiana mpampanoa lalàna, Flora matetika dia afaka manana ny fisaraham-panambadiana dia nanamafy avy hatrany rehefa avy ny fitsarana, ny fanesorana herinandro miandry ny didim-pitsarana mba ho namoaka.
Rehefa tonga ny mpila ravinahitra ny fisaraham-panambadiana ao Shina, ny zava-nitranga dia ny lafin-javatra manan-danja tao nanome toky fa tsara ny vokatra. Izay fomba ampiasaina, ary koa mandra-pahoviana ny dingana dia haka - dia miankina amin'ny antsipirihany ny toe-draharaha. Dia handeha izahay mihoatra ny roa karazana ny fisaraham-panambadiana ao anatin'ny fotoana fohy Ny fisaraham-panambadiana atao ao Shina dia manan-kery amin'ny hafa firenena ihany koa (ao anatin'izany rehetra ny Eoropa, ny ETAZONIA, Kanada, New Zealand sy Aostralia). Ny firenena tsirairay dia manana ny fitsipika ho an'ny 'nafindrany' ny didim-pitsarana avy amin'ny firenena iray hafa.
Manana ny fisaraham-panambadiana ny fitsarana voasoratra ara-panjakana na amin'ny fomba ofisialy ny fantatra eo amin'ny firenena an-trano dia tokony somary mivantana (ao amin'ny firenena sasany tsy misy fanampiny dingana ireo dia takiana), nefa ny tena fandraisana tsy miovaova arakaraka ny firenena ny manaraka.
Ny fisaraham-panambadiana amin'ny alalan'ny fifanarahana ihany izay azo atao rehefa roa tonta ny fanambadiana te, na, fara fahakeliny, manaiky, mba hahazo nisara-panambadiana.
Ao amin'ny nanaiky ny fisaraham-panambadiana ny antoko amin'ny ankapobeny maimaim-poana mba hifampiraharaha ny ankizy sy ny spousal fanohanana fandoavam-bola, ny famaliana ny zo sy ny fizarana ny mpiara-panambadiana ny fananana (ohatra varotra sy hofa fananana mifaka, ny fanaka, ny vola, fampiasam-bola, sns.) tsy misy fitsabahana avy amin'ny Sinoa ny mpitsara. Raha ny fanambadiana no voalohany natao tao Shina sy ny vady iray teratany Shinoa, 'express' ny fisaraham-panambadiana fomba dia matetika azo atao. Amin'ny fisehoan-javatra io amin'ny Sinoa ny fitsarana no tsy ampiasaina Fa tsy, ny fisaraham-panambadiana dia voasoratra amin'ny Shinoa ao an-toerana Fanambadiana, Fisoratana anarana amin'ny Biraon'ny (izay ny sampan-draharaha ao an-toerana Sivily Raharaham-Birao), sy ny fisaraham-panambadiana taratasy navoakan'ny (fa tsy ny fitsarana ara-namoaka ny fisaraham-panambadiana ny fitsarana).
Raha vao ny ilaina ny fombafomba ara-dalàna dia vita, ny fisaraham-panambadiana dia niditra tao an-tsoratra sy ny fanambadiana amin'ny fomba ofisialy levona.
Ka mbola ny mpivady dia afaka ny ho tonga aminà fifanarahana mikasika ny fomba handaminana ny raharaha, ity dingana ity dia afaka matetika ho vita somary haingana, fa azo ampiasaina ihany amin'ny sasany dia tena tsotra-javatra (ary ny mpila ravinahitra ny mpivady tsy afaka mampiasa azy io mihitsy). Izany no somary mahazatra ny mpila ravinahitra ny mpivady monina ao Shina ny antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana raha mbola eo namana iombonana. Tokoa, ireo mpivady izay tsara vintana ho afaka miasa avy rehetra, tsara ny hevitra ao amin'ny fisaraham-panambadiana ary ataovy an-tsoratra matetika farany mamonjy ny be ny fotoana sy ny ezaka. Amin'ny toe-javatra ireo, ny fisaraham-panambadiana dia tsy heverina ny 'maha-be resaka', fa satria ny fitsipika manokana ny fampiharana ny vahiny mpivady, ny Sinoa ny fitsarana dia mbola tompon'andraikitra am-ny fisaraham-panambadiana. Ny ara-pitsarana fomba ampiasaina dia antsoina hoe 'ny fisaraham-panambadiana ponenana ny fandraisana ho mpikambana' (indrindra friendlier, notsorina ara-dalàna ny fomba ampiharina eo amin'ny tantara ny roa nanaiky ny fisaraham-panambadiana). Raha ny ara-teknika mbola sokajiana ho pitsarana, amin'ny fomba fanao rehetra izay no mitranga dia ny fitsarana manaiky ny vonona voasoratra fifanarahana atao miaraka amin'ny vadiny sy am-bava isan-karazany manamafy ny zava-misy mikasika ny fanambadiana sy ny toetry ny sain ny antoko. Amin'ny faran'ny ny dingana fitsarana ny olana ny 'sivily fanelanelanana fanambarana', izay karazana didim-pitsarana. Izany ara-dalàna ny tahirin-kevitra dia ampiasaina ho porofo ny fisaraham-panambadiana ary dia manan-kery manerana ny tany.
Ao anatin ny fisaraham-panambadiana dingana, za-draharaha Shinoa ny fisaraham-panambadiana mpisolovava foana hikarakara ny fandrafetana ny fisaraham-panambadiana fifanarahana (amin'ny teny anglisy sy Sinoa) sy ny fanomanana ny roa noho ny fitsarana, ankoatra ny manatrika ny fitsarana.
Mety ho toy ny adaladala mba mangataka, fa amin'ny zava-misy fanavahana izany zava-dehibe ny ho be dia be raha izany tonga mifarana ny fifandraisana.
Ny mpivady izay manambady ara-dalàna dia afaka misafidy na misaraka vonjimaika ary antenaina fa hampihavana na nandeha mialoha hahazo feno sy fisaraham-panambadiana farany, izay midika tanteraka mifarana ny fanambadiana amin'ny fomba ara-dalàna.
Ny ara-dalàna azo fisaraham-panambadiana no hany fomba maharitra hamaranana ny fanambadiana sy ny takiana mba hanambady indray.
(amin'ny ankapobeny, eo amin'ny iray ny dimy taona) dia ilaina aloha ny mpivady dia afaka mangataka fisaraham-panambadiana. Shina dia tsy misy ny fisarahana araka ny lalàna ny fepetra takiana, ary izany dia tsy ilaina ny misoratra anarana ny fisarahana amin'ny fitsarana. izay tsy maintsy ho nihaona tamin'ny farafahakeliny ny iray amin'ny vadiny - alohan'ny izany dia azo atao ny rakitra noho ny mpila ravinahitra ny fisaraham-panambadiana ao Shina. Fa hipetraka mba hanisa amin'ny fivoriana ny fitakiana, tsy maintsy ho ara-dalàna sy hamarinina (raha toa ka voasoratra ao amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana ao an-toerana rehefa nifindra ny amin'izao fotoana izao ny adiresy ianao, dia azo inoana fa manana ny antontan-taratasy ilaina efa). Raha toa ianao ka manambady Shinoa olom-pirenena, dia tsy misy honina fepetra takiana ho fisaraham-panambadiana ao Shina. Toerana iray ihany vady maniry ny hamaranana ny fanambadiana, ny fisarahana am-panambadiana dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny fitsarana.
Noho ny fiheverako dia tsy misy talohan'ny fifanarahana, ny fitsarana dia manapa-kevitra ny hanorim-ponenana rehetra miavaka ireo olana ao anatin'izany.
Mahaliana iray mampiavaka ny Shinoa litigated fisaraham-panambadiana no mifantoka apetraka ny fitsarana momba ny miezaka mba hahazoana ny fifampiraharahana ponenana.
Amin'ny ankapobeny, ny mpitsara dia, amin'ny hevitra maro manerana ny pitsarana dingana, mangataka ny mpivady raha misy ponenana toa tahaka ny antonony mety sy, raha izany, raha toa izy ireo dia te mba hivadihana ho amin'ny fitsarana ny fankatoavana mba hanandrana ary dia hamahana ny fahasamihafana.
Mazava ho azy, raha ny fifandraisana no tena acrimonious, na raha fanelanelanana tsy mahomby mba hanafaka ny marimaritra iraisana, ny fitsarana indray izy mandray ny tranga sy ny olana farany didim-pitsarana.
Ny mikasika ny fisaraham-panambadiana ho toy ny fanomezana avy amin'ny Sinoa ny fitsarana rehefa farafahakeliny ny iray amin'ireo toe-javatra manaraka ireto dia mety ho afa-po: - Toy ny any amin'ny firenena rehetra, litigated ny fisaraham-panambadiana dia be sarotra kokoa noho ny consensual iray. Izany dia hitondra intsony ary lafo kokoa mba hiatrehana noho ny consensual ny fisaraham-panambadiana Amin'ny ankapobeny, na amin'ny fomba ahoana fanantenana ny fahasamihafana mety ho toa, izany dia efa foana ny hevitra tsara mba hanandrana sy ny hamaranana ny fanambadiana amin'ny alalan'ny fifampiraharahana fisaraham-panambadiana ponenana. Ny mpahay lalàna Sinoa dia afaka mazava ho azy hanampiana ny mpitari-dalana anao amin'ny alalan'ny dingana izany. Ianao dia mila ofisialin'ny governemanta taratasy fanamarinana ny fanambadiana, mba hiatrehana ny fisaraham-panambadiana ao Shina. Izany dia matetika ny taratasy fanamarinana dia azo avy amin'ny fanjakana na ny governemantam-paritany rehefa nanambady. Raha izany dia efa very, na dia tsy manana ny fahazoana ho azy, vaovao ny dika mitovy ny taratasy fanamarinana dia mety ho baiko avy amin'ny manan-danja ny governemanta sampan-draharaha (isika ihany koa dia afaka handamina izany ho anao). Raha toa ka nivady tany Shina, dia afaka manampy anao hahazo ofisialy dika mitovy ny fanambadiana, fisoratana anarana amin'ny firaketana an-tsoratra avy amin'ny Sivily ny Raharaham-Birao izay amin'ny fanambadiana no nanao, izay dia afaka manao toy ny fanoloana ny taratasy fanamarinana tany am-boalohany (hoe ny mena fanambadiana boky).
Ny zavamaniry dia ao Shina, tena za-draharaha iraisam-pirenena ny fisaraham-panambadiana mpisolovava, ary izy dia misy foana ny hanampy anao na aiza na aiza no misy, na izay nanambady.
Solontenan'ny Birao Fisoratana anarana ao Shina - Shenzhen - Beijing - Shanghai